Kedu ihe ha bụ, olee otu esi akpụ ha na ụdị ebili mmiri | Network Meteorology
Anyị niile nwere mmasị ịga n'akụkụ osimiri wee nwee ihu igwe dị mma, sunbathe ma saa ahụ nke ọma. Otú ọ dị, ụbọchị ndị ifufe siri ike na-efe, ebili mmiri na-egbochi anyị ịsa ahụ́ ahụ na-enye ume ọhụrụ. N’ezie ị chetụla n’echiche etu ebili mmiri ndị ahụ na-adịghị agwụ agwụ na-anaghị akwụsị akwụsị, mana ị maghị ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe ebili mmiri ahụ bụ.
You chọrọ ịmata ihe ebili mmiri nke oké osimiri bụ na otu esi akpụ ya?
1 Gịnị bụ ebili mmiri?
3 Ihe ndị metụtara ya
4 Wayzọ ọzọ iji mepụta
5 Ofdị ebili mmiri
Gịnị bụ ebili mmiri?
Ebili mmiri abụghị ihe na-erughị otu mmiri dị n’elu oké osimiri. Ha nwere ike ịga ọtụtụ kilomita n'ofe oke osimiri na, dabere na ifufe, ha na-eme ya na elu ma ọ bụ obere ọsọ. Mgbe ebili mmiri ahụ rutere n’akụkụ osimiri, ha na-agbaji ma kwụsịchaa.
Ọ bụ ezie na a na-echekarị na ebili mmiri bụ ihe ifufe na-eme, nke a na-aga n'ihu. Ezigbo onye na-emepụta ebili mmiri abụghị ifufe, kama ọ bụ Anyanwụ.Ọ bụ Anyanwụ na-eme ka ikuku ụwa dị ọkụ, ma ọ naghị eme ka ọ dịrị otu ebe niile. Nke ahụ bụ, akụkụ ụfọdụ nke ụwa na-esiwanye ike site na Sun karịa ndị ọzọ. Mgbe nke a mere, nrụgide nke ikuku na-agbanwe agbanwe. Ebe ebe ikuku na-ekpo ọkụ karị, nrụgide nke ikuku dị elu na mpaghara nke nkwụsi ike na ihu igwe dị mma, ebe ndị na-eme ihe na-adịghị mma. N'aka nke ọzọ, mgbe mpaghara anaghị ekpo ọkụ karịa na Sun, nrụgide nke ikuku dị ala. Nke a na-eme ka ikuku ikuku na-ebilite na nrụgide na-enweghị nrụgide.
Ike ikuku nke ikuku na aru oru dika nke miri. Mmiri ahụ, na nke a, ifufe na-aga site na ebe a na-enwekwu nrụgide gaa na ebe enwere obere. Nke ka ukwuu n ’nsogbu dị n’etiti otu mpaghara na ebe ọzọ, ikuku a ga eku karịa ma nye oke ifufe.
Mgbe ifufe malitere ife ma ọ na-emetụta oke osimiri ahụ, ikuku ikuku na-ehicha ahụ na obere mmiri na obere ebili mmiri na-amalite. A na-akpọ ihe ndị a okpu okpu na ha abụghị ihe ọ bụla karịa obere ebili mmiri naanị obere millimeters. Ọ bụrụ na ikuku efega ruo ọtụtụ kilomita site na mmiri, ebili mmiri na-eto eto na-ebute nnukwu ebili mmiri.
Enwere ọtụtụ ihe nwere ike dozie nguzobe na oke ya. O doro anya, ifufe siri ike na-emepụta ebili mmiri dị elu, ma anyị ga-eburukwa n'uche ọsọ na ike nke ihe ifufe na-eme na oge ọ na-adịgide n'ọsọ ọ kwụsiri ike. Ihe ndị ọzọ na-ekpebi nhazi nke ebili mmiri dị iche iche bụ mpaghara emetụta na omimi. Ka ebili mmiri ahụ na-erute n’akụkụ mmiri, ha na-eji nwayọ nwayọ n’ihi ntakịrị omimi, ebe krist ahụ na-abawanye elu. Usoro a na-aga n’ihu ruo mgbe mpaghara a zụlitere na-aga ngwa ngwa karịa akụkụ mmiri okpuru mmiri, bụ mgbe ọrụ ahụ na-agbagha ma ebili mmiri ahụ mebiri.
E nwere ụdị ebili mmiri ndị ọzọ nke dị ala na nke a na-akpụ site na ọdịiche dị na nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ na salinity nke akụkụ ndị dị nso. Esemokwu ndị a na-eme ka mmiri na-agbagharị ma na-ebute mmiri nke na-etolite obere ebili mmiri. Nke a ka a na-akpọ oké osimiri mmiri na ebili mmiri.
Mmiri mmiri kachasị mma anyị na-ahụ n'akụkụ osimiri na-enwekarị a elu n'etiti 0,5 na 2 mita na ogologo n'etiti 10 na 40 mita, ọ bụ ezie na e nwere ebili mmiri nke nwere ike iru mita 10 na 15 n'ịdị elu.
Wayzọ ọzọ iji mepụta
Onwere uzo ozo ozo n’enye uzo n’ebili mmiri ma obughi ikuku. O bu maka ala oma jijiji. Ala ọma jijiji bụ usoro ala nke, ọ bụrụ na ha emee na mpaghara mmiri, nwere ike ibute nnukwu ebili mmiri a na-akpọ tsunamis.
Mgbe ala ọma jijiji mere na ala oke osimiri ahụ, mgbanwe mberede na-eme n’elu na-eme ka ebili mmiri dị ọtụtụ narị kilomita gburugburu gburugburu. Ebili mmiri a na-agbagharị ọsọ ọsọ ọsọ site n'oké osimiri, na-eru 700km / h. E nwere ike iji ọsọ a tụnyere nke ụgbọelu jet.
Mgbe ebili mmiri na-adịghị site n’ikpere mmiri, ebili mmiri na-ebugharị na mita ole na ole n’ogologo. Ọ bụ mgbe ọ na-eru nso n'ụsọ oké osimiri ka ha na-abawanye n'etiti 10 na 20 mita n'ogo ma bụrụ ugwu ugwu nke mmiri na-emetụta oke osimiri ma na-emebi ụlọ ndị gbara ya gburugburu na ihe nrụpụta niile dị na mpaghara ahụ.
Tsunamis ebutela ọtụtụ ọdachi kemgbe ụwa. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ụdị ebili mmiri ndị na-etolite n'oké osimiri iji mee ka ụsọ oké osimiri dị nchebe na, na mgbakwunye, iji nwee ike iji nnukwu ike a na-ewepụta n'ime ha iji mee ka ọkụ eletrik dị ka emere maka mmeghari ohuru.
Ofdị ebili mmiri
E nwere ọtụtụ ụdị ebili mmiri dabere na ike na ịdị elu ha nwere:
Ebili mmiri ma ọ bụ oscillating. Ndị a bụ ebili mmiri ndị dị n’elu ala ma ọ bụ n’ihi ọdịiche dị n’oké osimiri. N'ime ha mmiri anaghị aga n'ihu, ọ na-akọwa ntụgharị mgbe ọ na-arịgo na ala ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ebe ebe ịrị elu ebili mmiri malitere.
Ebili mmiri ntụgharị. Ebili mmiri a na-erukwa n'ikpere mmiri. Mgbe ha na-aga n’ihu, ha na-emetụ oke osimiri ahụ aka ma jiri aka ya wee daa n’ụsọ mmiri na-eme ọtụtụ ụfụfụ. Mgbe mmiri laghachiri ọzọ hangover na-etolite.
Ike na ebili mmiri. Ihe ndi a na emeputa site na oke ikuku nke nwere ike idi oke.
N'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, oke osimiri na-arị elu ma ebili mmiri na-arịwanye elu n'ụsọ oké osimiri. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịmata ihe niile enwere ike ime gbasara ebili mmiri nke ebili mmiri iji mee ka akụkụ mmiri anyị bụrụ ebe nchekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe ha bụ, otu esi akpụ ha na ụdị ebili mmiri